Kooxda Barcelona oo indhaha ku haysa bisha Janaayo inay la wareegto daafac ka tirsan Arsenal – Gool FM
Kooxda Barcelona oo indhaha ku haysa bisha Janaayo inay la wareegto daafac ka tirsan Arsenal
Haaruun November 16, 2020
(Barcelona) 16 Nof 2020. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo warinayaa inay indhaha ku haysa sidii ay ula soo wareegi lahayd bisha Janaayo daafaca ka tirsan Arsenal ee Shkodran Mustafi.
Barcelona ayaa isku dayi karta inay si layaab leh ugu dhaqaaqdo daafaca kooxda Arsenal ee Shkodran Mustafi inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xiddigaha ee bisha Janaayo sida warbixinnadu ay tilmaamayaan.
28-sano jirkaan ayaa waqtigiisa garoonka Emirates waxa uu ku dhow yahay dhammaad, Mustafi ayaana ku jira sanadkiisii ugu dambeeyey ee qandaraaska uu kula jiro Arsenal, iyadoo aysan muuqan wax heshiis kordhin ah oo labadaan dhinac ay ka wada hadalayaan.
Daafaca dhexe Aabihiis ayaa dhowaan sheegay in Mustafi uu raadsan karo goob cusub kaddib markii uu ka dhacay xulashada safka hore ee tababare Mikel Arteta, iyadoo David Luiz, Rob Holding iyo Gabriel Magalhaes ay dhamaantood ka horreeyaan isaga.
Inkastoo uu dhexda kaga jiray dhaleeceyn badan intii uu joogay Waqooyiga London, haddana Warsidaha Diario Sport ayaa warinaya in Macallinka Barcelona ee Ronald Koeman uu u calaamadeeyay Mustafi inuu yahay saxiix macquul ah.
Warbixinta ayaa sheegaysa in tababaraha Barca uu doonayo inuu xoojiyo safkiisa daafaca, laakiin Manchester City ee Eric Garcia ayaa weli ah bartilmaameedkiisa koowaad, laakiin kooxda reer Catalan ayaa u dhaqaaqi karta Mustafi haddii baacsigooda Garcia uu noqdo mid aan lagu guuleysan.
Mustafi ayaa dhaliyay sagaal gool 146 kulan oo uu xirtay funaanadda Arsenal, laakiin ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Jarmalka ee dhaawaca uu dhaawac soo gaaray ayaan weli ku bilaaban safka hore kulan Premier League ah xilli ciyaareedkan.
RASMI: Laacib hore ugu soo ciyaaray Kooxaha Liverpool iyo Barcelona oo ciyaaraha ka fariistay